SHirkii golaha wasiirada iyo waxyaabihii lagaga hadley oo dhameystiran.
Khamiis, November 19, 2015 (HOL) — Golaha Wasiirrada Xukuumadda Soomaaliya ayaa kulankoodii maanta waxay isku raaceen in dib loo furo safaaradihii Soomaaliya ee la xiray bishii Luuliyo ee sannadkii 2014-kii, go'aankaasoo ay golaha wasiirrada Somalia ay horay u go'aamiyeen in la xiro. Shirka golaha wasiirrada ayaa sidoo kale warbixinno looga...
DHEGEYSO; Ganacsiga gawaarida iyo tartan u dhexeeya taxi-leyda iyo Mooto Bajaaj
Magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxaa ay soo martay bur-bur dhinacyo badan leh oo 23 sano kabadan,waxaana waxyaabaha meesha ka baxay kamid ahaa Ganacsigii,laakiin mudadaasi kadib waxaa iminka muuqanaya nolol iyo inuu soo laabanayo dhaq dhaqaaqii ganacsiga iyo shaqo helista dhalinta yeysanba gaarine xitaa 20%. Ganacsiga iyo dhaq dhaqaaqa iminka soo...